Guam dia nahazo isa isam-bolana tsara indrindra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Guam dia nahazo isa isam-bolana tsara indrindra
Birao mpitsidika an'i Guam
Ny Sampan-draharahan'ny Fikarohana momba ny mpitsidika ao Guam (GVB) dia nanamafy fa ny fahatongavan'ireo mpitsidika ho an'ny Mey 2019 dia nanapaka firaketana 22 taona lasa lasa volana Mey ambony teo amin'ny tantaram-pizahan-tany Guam.
Nandray mpitsidika 120,082 (+ 5.3%) nosy ny nosy nandritra ny Volan'ny fizahan-tany. Raha naka ny salan'isa lanja $ 595.51 tamin'ny fandaniana tamin'ny volana faharoa tany amin'ny nosy, ny habetsaky ny mpitsidika tamin'ny Mey dia tombanana ho 71.5 tapitrisa dolara nampidirina tao amin'ny toekarena teo an-toerana. Ny volana Mey dia nanomboka tamin'ny fanombohana tamin'ny alàlan'ny rambon'ny herinandro Golden fonosana tamin'ny 6 Mey, ary koa ny fitsidihan'ny sambo fitsangantsanganana Asuka II. Ny vanim-potoana Golden Week dia nampiseho fitomboana 18% noho ny Herinandron'ny Golden tamin'ny taon-dasa miaraka amin'ny sidina 68 an'ny charter izay nitondra mpitsidika Japoney efa ho 10,000. Ny Asuka II dia nitondra mpandeha 900 tany Guam ihany koa. Ny andro nialoha ny Guam Micronesia Island Fair (GMIF) dia nampiseho ny fitomboan'ny fahatongavan'ireo mpitsidika ihany koa.
Ny fanarenana ny tsenan'i Japon dia mitohy izay mpitsidika 41,688 (+ 14%) no voarakitra, raha 58,248 3.7 (-41%) ireo tonga tany Korea Atsimo. Ny tsena hafa izay naneho fitomboana lehibe dia ao Taiwan ny + 29.3% mandritra ny volana, ny Filipina amin'ny + 47.4%, i Malezia amin'ny + 25.9%, i Singapore ny + 21.2%, ary i Hong Kong ny + 2.8%. Nahita fitomboana kely ihany koa i Etazonia tamin'ny + XNUMX%.
"Nanomboka volana mahafinaritra momba ny fizahan-tany izahay tamin'ny herinandro Golden record ary namarana izany tamin'ny fankalazana ny fandriam-pahalemana sy ny finamanana tany Pasifika tamin'ny Fetiben'ny Nosy Guam Micronesia faha-31 ho toy ny fanombohana ny hetsika fahavaratra mifamatotra amin'ny Fahafahana faha-75," hoy ny filohan'ny GVB sy CEO Pilar Laguaña. “Te hisaotra ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany sy ny fiarahamonina izahay noho ny fiarahan'izy ireo naneho ny nosinay tamin'ny fomba tsara indrindra. Andao hanohy hampamirapiratra ny fanahintsika sy ny kolontsaintsika Håfa Adai ho hitan'izao tontolo izao. ”
Ny fahatongavan'ireo mpitsidika ny taom-pankalazana 2019 sy ny taom-pankalazana an'io daty io dia mitovy amin'ny 6.4% raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2018 ..
kitiho eto hamaky ny tatitra amin'ny antsipiriany.